WAO:Waldorgommii Og-barruu Afaan Oromoo - OPride.com
WAO:Waldorgommii Og-barruu Afaan Oromoo
Waldaan Artistoota Oromoo (WAO)n guddina Afaan Oromoo fi og barruu isaaf, akkasumas og-dammaqiinsa sabummaa Oromoof hirmaannaa ba’aa ture daran bifa qindaa’ee fi cimeen itti fufuuf sochii adda addaa gochaa jira. Haala kanaanis dhuma baatii Adoolessaa bara 2011 Minneapolis MN keessatti konsertii bal’aa guyyaa tokkoof turu qopheessuuf irratti hojjechaa jira. Haala kanaanis barreessitoota Oromoo muxxannoo barreeffama do’ii (diraamaa) qopheessuu qaban wal dorgomsiisuun kanneen mo’ataniif badhaasa qopheessee jira. Kanaafuu kanneen dorgommii kana keessatti qooda fudhachuu barbaaddan ulaagaa armaan gadii irratti hundooftanii akka irraa qooda fudhattaniif isin afeerra.
A) Barreeffamni do’ii kanaa maal akka fakkaachuu qabu irratti
1) Mata duree Barreeffama Do’ii dhihaatuu: “Walii Galan, Alaa galan”
2) Qabiyyaan ykn barreeffamni do’ii kanaa kan inni irratti qiyyaafachuu qabu: Dhibdee siyaasaa har’a sabni keenya keessa jiru kan agarsiisuu fi fala ittiin dhibee kana keessaa ba’uun danda’amu irratti furmaata wayii kan akeeku.
3) Dheerinni do’ii kanaa: daqiiqaa 40 hanga 60 qofa gidduu ta’uu qaba.
4) Baayyinni namoota do’ii kanaatti qooda fudhatanii: Namoota 15 kan hin caalle.
5) Yeroo itti barreeffamni do’ii kanaa nu ga’uu qabu: Ebla (April) 30 bara
Barreeffama do’ii kanaa dhiheessuun sadarkaa 1ffaatti hanga 3ffaatti kan mo’ataniif badhasa horii (maallaqatu) laatama. Kanaafuu barreessitootni Oromoo waldorgommii og barruu kana keessatti qooda akka fudhattaniif kabajaan isin afeerra. E-mail isin barreeffama kana ittiin nuuf ergitan: waldaaartistootaoromoo@yahoo.com dha.
ABO: Waamicha Wolgahii Hawaasa Oromoof
Midwest Oromo Community Newsletter